मेरो धादिङ अनलाइन: मेरो सपनाको गाउँ
मेरो सपनाको गाउँ
नयन्द्र चेम्जोङ्ग ।
तेल अभिभ इजरायलको कोलाहल ब्यस्तता तनाबलाई छिचोल्दै बेला बेलामा मेरो मोबाइल फोनहरुमा हातका औलाहरु अनायासै सल्बलाउदै त्यहि नम्वर थिचिन थाल्छन जुन नम्वरमा धेरै लामो सम्पर्क पछि मात्र सानो मधुरो अस्पष्ट आवाज आउछ…। हलो……॥कान्छा काका हो काका नमस्कार ! बोजुलाई दिन्छु है ! ठूलदाजुको छोरी पर्मिला मेरो स्वर चिन्ना साथ बोजु वरीपरी छ भने तुरन्तै फोन दिइ नै हाल्छ तर फोन लाग्न भन्दा पनि गारो हुन्छ बोजुको कानमा फोनको सेट मिलाउन । कहिले बोल्ने सुन्ने तिर पर्छ त कहिलॆ सुन्ने बोल्न तिर । बल्ल बल्ल ठीक ठाउमा त पर्छ आवाज सधैं मधुरो हुन्थ्यो र सधै एउटै शब्द लवज दोहोरिन्छ घरमा कहिले आउछस कान्छा मलाई भेट्छस के म धेरै वाच्दिन होला । छिट्टै आएर मुख देखाएर मात्र भए पनि जा । आमाको यो निरासाजनक अभिव्यक्तिले मलाई एकदमै सताउन थाले पछि मैेले धेरै लामो समयान्तरमा घर गएर आमालाई भेट्ने नै अठोट गरे । यसै बिचमा मैेले आमालाई फोन गरेर भने म अलि पछि आउने भए आमा कामले गर्दा ढिलो होला जस्तो छ म के गरु आमाले धेरै कुरा गर्नु भएन मात्र यति मात्र भन्नु भयो "म मरे पछि मात्र आइज ।" सम्झे आमा अहिले ८२ बर्ष लाग्नु भयो । नेपालीको औषत आयु भन्दा पनि २० वर्ष बढी । संसारमा धन दौलतले पाउन नसकिने जन्म दिने वाबु र आमा नै हो । मैले मेरो आमाको समिप्यमा रहेर धित मर्ने गरी आमासंग भलाकुसारी नगरेको पनि दुइ दशक भन्दा पनि बढी भै सकेको रहेछ । जहिले पनि छोटो वसाई एक दुइ दिन भन्दा बढी समय नै दिन नमिल्ने यस चोटी चाहि अलि लामै समय बस्ने विचारले पाचँ वर्षको अन्तरालमा घर जाने जमर्को गरे ।
काठमाण्डौ गएको भोली पल्ट बिहानै आमालाई फोन गरे र भने "आमा म काठमाण्डौ आएको छु" आमाले रोदन मिसि्रत स्वरमा यति मात्र भन्नु भयो "तँ आइस बाबु ! घरमा कहिले आउछस त " आमाले मलाई नानी बाबु भनेर सम्बोधन गरेको कहिल्यै थाहा थिएन । हाम्रो परिवारको एउटा संस्कार थियो परिवारका सदस्यहरुलाई प्राय नामबाट नबोलाएर रोलक्रम अनुसार जेठा माइला साइला कान्छा ठूली कान्छी नै हाम्रो सम्वोधनका आधारहरु हुन् । निशान १६ वर्ष पुरा भइ सत्र लागेको कानूनी हिसावले उ अव यो देशको नागरिक हुन लागि रहेको छ । उसलाई नागरिकता पनि दिलाई दिने विचारले हामी बाबु छोरा दुवै जना अग्नी एयर को उडान बाट विराटनगर जाने तरखरमा लाग्यौ । हामी उडानको लागि सबै जाँच पास गरी वरी जहाज भित्र चड्नै मात्र के लागेको थियौ कसैको मोवाइलमा घण्टी बज्यो आज विराटनगर बन्द छ । जहाजमा चड्न लागेका सबै जनाको अनुहार धमिलो भयो । बिराटनगर पुगेको त साच्चे नै दुहबी बन्द रहेछ । कारण केही हैन धरानमा विद्याथीलाई गाडिको खलासीले कुटी दिएछ । अहिले नेपालमा त्यस्ता बन्दहुनको लागि त्यस्तो कुनै कारण नै चाहिदैन जे गरे पनि बन्द जे भए पनि बन्द प्रजातन्त्र आए पछि बन्द हडताल आगजनी नारा जुलुस जस्ता शान्ती र विकाशका अवरोधात्मक कृयाकलापहरु खुबै फस्टाएको छ । अब बलभद्र अम्मरिसंह भक्तिथापा को राष्ट्रभक्तीको गाथा त इतिहासको दन्त्य कथा भै सक्यो । यहाँ त स्वास्नी अर्कैले भगाएर लग्यो भने पनि दुइ चार जना आवाराहरुलाई दुइचार सेर जाँड खुवाएर हो हल्ला गराएर बन्द हुलदँगा बन्द गराएको समाचार आउन थालि सक्यो । हरेक समस्याको प्रदर्शन र बदला लिने ठाउँ सडक भएको छ बजार भएको छ सवारी साधन भएको छ । जे होस हाम्रो बिपत्तीमा अवसरलाई सही सदुपयोग गर् यो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि । करिव तीस किलोमिटरको बाटोलाई घुमाउदै लुकाउदै छलाउदै गन्तब्य धरान सम्म पुर् याउन पाँचहजार रुपैयाबाट मोल मोलाई गर्न थालेपनि चारहजार पाँच सयमा पुर् याउने सहमती भयो र पुग्यौ । धरान पूर्वको पहाडी क्षेत्रलाई जोड्ने सुन्दर बजार पहाड र मधेसको संगम स्थल । आवरणमा धरान सुन्दर भए पनि मलाई त्यति धेरै रमाइलो लाग्दैन । प्रकृति र सौन्दर्यमा लठ्ठिन्छु म । तर मलाई शहर बजार मानव वस्तीहरु भन्दा पनि प्राकृतिक सौन्दर्य हिमाल पहाड खोला नाला झरना भिर पहराहरु मेरो हितैषी र आफन्त हो जस्तो लाग्छ । एकान्त र शान्तपे्रमी हुँ । कोशी राजमार्गको निर्माण हुनु भन्दा अगाडि पैदल यात्रीको रुपमा गाउँबाट धरान दुइ चार पटक आवत जावत गरेको सम्झना छ मलाई । अमरहाट सारंगा सिकारबास खरवनी छोटीमोरङ्ग काम्फेक नाम्जे काने पोखरी कुइभिर ओखे्र ओडारे बटुवाहरुका लागि कहलिएका गौडाहरु हुन । गाँउघरबाट धरान जाने बेलामा गाँउघरमा उत्पादित फलफुल तथा तरकारीहरु धरानमा लगेर बेच्ने र विक्रीबाट आएको पैसाले घरायसी सामानहरु चामल तेल मसला नुन आदि इत्यादिका सामानहरु गाउँघरमा भित्रिने गरिन्थ्यो । धरानको रमणिय वस्ती झिलीमिली गाडी इत्यादी भन्दा पनि धरानबाट सामान लिएर आएका सोल्टीनीहरुसंग बाटोमा हास खेल ठट्टा गदै दिल्लगी गर्दै बाटो काटेको आनन्द र रमाइलो पन नै बेग्लै हुने गर्दथ्यो । हिउद लागे पछि गाँउ घर तिर पाकेका राताम्मे सुन्तलाका भरियाका ढाकरहरुका तातीहरुले कुनै िसंगारिएका दुलहीका लस्कर झै देखिन्थे । धरानबाट उकालो लागेपछि जब हाम्रो रिजर्ब गाडिले गुम्तीहरु पार गर्न थाले धरान देखी माथीको त्यो नाक ठोकिने सिकारवास उकाकोलाइ देखाउदै मैले निशानलाई भने " निशान पहिले हामी धरान आउदा जाँदा यो उकालो बाटो ओहोर दोहोर गथ्र्यौ "। निशानले खिस्स हासे जस्तो गरेर टारिदियो उसलाई के थाहा खोला नाला भिर पाखा पखेराको दुख ब्यथा । तर म त्यतीमै अडिन सकिन म सम्झदै थिए कुनै समय मलाई पनि आफ्नै वारीमा पाकेको सुन्तला धरानमा लगेर बेचेर रमाइलो गर्ने मुड चल्यो । अघिल्लो दिन एउटा बाँसको तामा काटेर ल्याएर चोया काडे र त्यहि दिन भित्रैमा एउटा ढाकर पनि बुने ढाकरलाई चाहिने खकन तोक्माङ्गहरु प्नि सबै तयारी गरे । धेरै लामो बाटो कहिल्यै भारी बोक्ने बानी नपरेको सुन्तला सय दाना मात्र हाले ढाकरमा । अघिल्लो दिन बेलुकी नै भोलीको लागि भनेर सातु चामल रोटीहरु ख्ााजाको बन्दावस्तो गरे पछि बिहानै सुन्तलाको भारी बोकेर लागे धरान तिर । बाटामा अनगिन्ति आफन्त नाता गोता इष्ट मित्र हरु भेटिन्थे । हाम्रो परिवार समाजमा अलि वढी परिचित पृष्ठभूमि भएकोले एक दुइ वोटा गाविसमा त हामीलाइ नचिन्ने मान्छै नै हुदैन थे । बाबु बाजेको नाम लिने हो भने यो दुरी अझ निकै फराकिलो हुन्थ्यो । मैले कसैको करमा त्यो सुन्तलाको ढाकर बोकेको हैन एउटा समयान्तरको रहर थियो । मलाई धरान जान भन्दा पनि भिर पहरा जंगलको बाटोमा भारी बोकेर रौसिदै परिचित आफन्तहरु हिडुनमा नै मैले रमाइलो अनुभूति गरेको थिए । चिनजानका सबै जना मलाई देखेर हास्थे । सायद मैले ढाकर बोकेको देखेर उनीहरुलाई अनौठो लागि रहेको थियो । ढाकरमा सय दाना सुन्तला छ बाटो खर्च भने पनि सम्पति जे भने पनि त्यति नै हो । अघिल्लो रात अमरहाटमा बसे पछि भोली पल्ट बिहानै सबै भन्दा अगाडि सुन्तला बेच्ने भनेर धरान पुरानो हाट लागे । विहान सात वजे धरान पुगेको एघार बजि सक्यो मेरो ढाकरको सुन्तोला कसैेले किन्नै आएन । सबै साथीहरु भारी बेची वरी छाप्रे होटेलमा गएर चार अैची मोटो बंगुरको मासु संग खाना खाइ वोरी घर फर्कन लागि सके । बेलुकीको पाँच वजी सक्यो मेरो सुन्तोलाको भारी बिकि्र हुने छाटै छैन । सारै दिक्क भयो । त्यसै फालिदिनु पनि घरमा जाने खर्च नै छैन खर्च त जसो तसो मागेर काम चलाउथे नै होला तर त्यसो गर्न पनि भएन । म त रुन लागि सकेको थिए जब रात पर्न लागे पछि चाही गाउँकै एक जना नातेदार पर्ने ले सहयोग गर्नु भयो एउटा चिनेको माडेकोमा लगेर बेचाइ दिनु भो । सय दाना सुन्तला ढाकर नाम्लो सबैको दाम गरेर जम्मा १३ रुपैयामा बेचेर हिडे । त्यो दिन बेलुकी सम्म भोकै वसे पनि अमरहाट पुगे पछि भने त्यो पैसाले नै टन्न खाए । त्यस पछि त मलाई धरान झनै नरमाइलो लाग्न थाल्यो । त्यस पछि मैेले सुन्तोला बोकेर धरान जान करिव करिव कसम नै खाए । ढाक्रे जीवनको रामोण्टीक क्षणको कल्पना संगै हामी भेडेटार पुग्न लागि सकेको रहेछौ । मान्छेले जन्मेर कर्म र लगनले आफ्ना भाग्य बदल्छ त्यस्तै समय र परिस्थितिले कुनै स्थान विशेषको प्राकृतिक सौन्दर्य नै परिवर्तन गरिदिदो रहेछ । कुनै समय भेडाहरुको चरणको रुपमा रहेको भेडेटार कोशी राजमार्गको निर्माणले सो क्षेत्रको कायलपट नै ल्याइदिएको छ । अझ सन् १९८३ को समयतिर बेलायती युवराज चाल्स्रको भेडेटार नजिगैको सैसुङ्ग डाडामाथिको अवलोकन पछि त यसको रमणियता र ख्यातिले अन्तराष्ट्रिय चर्चा समेत पाउन सकेको छ । हामी भेडेटारको रमणियतामा धेरै बेर रम्न पाएनौ हाम्रो गाडि तयारी हालतमा थियो । बिहानै देखी केहि नखाएको कारणले एउटा रेष्टुरेण्टमा पस्यौ र खाने कुरा अर्डर गर्न थाल्यौ । खानेकुराहरुको तालिका र मूल्य हेरेर निशान खित्का छाडेर हास्दै अचम्म मानेर सोध्दै थिए बाबा यहाँ खानेकुराहरु थोरै दिन्छ हो मैले सोधे किन यो खानेकुराहरु किन यति सस्तो भयो त सम्झे काठमाण्डौको महँगी जनजीवनमा हुर्कदै छोराको मानसिकता नै महँगो भै सकेछ । विचरा उसलाई के थाहा गाउँको यथार्तता । उसले सोचे भन्दा सस्तो र मिठो खाएर हामी भेडेटारबाट हिड्यौ ।
करिब एक घण्टाको अन्तरमा हामी डाडाँबजार पुग्यौ । पूर्वााचलको महाभारत श्रृँखलामा अवस्थित दृष्यालोकनका लागि अत्यन्तै मनमोहक मानिने ध्वजे डाडाँको फेदीमा रहेको डाडाँबजार संग मेरो धेरै तीता मिठा स्मरणहरु छन् । म जहाँ गए पनि जहाँ रहे पनि ध्वजे डाडाँको बखान सबैलाई सुनाउने गर्छु । मौसम सफा भएको बेला यो ठाउँबाट पूर्वााचलका सोह्र जिल्ला यहाँबाट अवलोलकन गर्न सकिन्छ । यति हो प्रचार प्रसारको अभाबमा यसले आफ्नो ख्याती लिन सकेको छैन । संचार माध्यमको आखाँ नपुगेको नेपालकै दृष्यालोकनको लागि उपयुक्त सम्भावित पर्यटकिय स्थल मध्य यो पनि एक हो । अहिले जस्तो मौलाएको थिएन त्यतीखेरको डाडाँ बजार । अहिले हिसाब गर्दा म १४ वर्षको थिएछु मेरो गाँउमा भएको निम्न माध्यामिक विद्यालयको पढाइ सक्ने बितिकै म पनि माध्यामिक शिक्षाको लागि डाडाँबजार पढ्न गाउबाटै धाउन थाले । पुरा पुर दुइ घण्टा लाग्छ घरबाट । विद्यालय धाउन त थाले तर मलाई पढाइ के हो म केको लागि स्कुल गइ रहेको छु भन्ने कुराको हेक्का मलाई कहिल्यै भएन । म सधै सधै रोजा नै स्कुल धाउथे । मलाई पढ्न मन कहिल्यै लागेन स्कुल जानै मन नलाग्ने कति खेर टिफिन हुने र खाजा खाने हो ध्याउन्न सधै यस्तैमा वित्थ्यो । खाजा खानको लागि एक जना कटुवालको पसल थियो चना चिउरा पाउने त्यसैकोमा उधारो खान्थ्यौ । स्कुलको अन्तिम अन्तिम हुने बेलामा चना र चिउराको तीन रुपैया उधारो भएको थियो त्यो मैले त्यतिकै तिर्न पाइन जाँच सके पछि त म त्यो ठाउँमा अहिले सम्मे गएको छैन । आज २९ वर्ष पछाडि पनि मैले त्यो ऋणको भारी बोकि राखेको छु । मास्टरले गृहकार्य दियो भने त सय किलोको भारी बोकेर ल्या भनेको जस्तै हुन्थ्यो । म बदमास पनि थिइन । कपि किताबहरु पनि पर्याप्त मात्रामा थिएन कि जस्तो लाग्छ तर कपी किताब नै नभएर नपढेको चाही हैन म । घरमा आफ्नो समस्या कहिल्यै भन्दिनथे जानेर दिए लिन्थे नदिए आवस्यक ठानिन । कितावको विषय वस्तुहरुको कुरै नगरौ कुन कुन किताबहरु पढनु पर्छ भन्ने कुरा समेत मलाइ यकिन थिएन जस्तो लाग्छ । मान्छेमा एउटा समय हुदो रहेछ हामी छोरा छोरीहरुलाई हप्काएर फुक्र्याएर फकाएर अर्ति उपदेश दिएर कसैको उदाहरण दिएर बाबु हो पढ्नु पर्छ भनेर भन्छौ तर जब सम्म विद्यार्थीले पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर मन बाट प्रष्फुटन भएर आफैले मनन गर्दैन यो अर्ति उपदेश सबै भालुलाई पुराण सुनाए जस्तै हो त्यो हामै्र मुख्र्याइ हो । सुक्रबार आधा दिन विदा हुने भएकोले हामी ध्वजे डाडाँको आसपासको जँगलमा जान्थ्यौ । गुरासका फुलहरु राताम्मे फुली राखेको हुन्थ्यो । चतरा भन्ने एक प्रकारको बनस्पति हुन्छ त्यो लटरम्मै पाकि रहको हुन्थ्यो गुरासका फुलहरु र चतराका पाकेका दानाहरु टिपेर पेट टन्न हुने गरी खान्थ्यौ । जे होस जगलमा पाईने खान मिल्ने सम्म सबै खान्थ्यौ केही बाकी राखेनौ । यहाँ मेरो स्मरणमा लेख्न भुल्नै नहुने कुरा छ वार्षिक परिक्षामा म कक्षा आठमा फेल भए । सारै राम्रो भयो । हुनु पर्ने भयो । मास्टर सारै इमान्दारी रहेछ । त्यस पछि मैले पढ्न छाडि दिए ।
हाम्रो रिजर्भ गाडि बिच बाटैमा खाने पानीको पाइप खनेर खाल्डो बनाएकॊले आधा बाटो देखी गाडि फर्कियो र पहिले जस्तो घोरेटो बाटो हैन अहिले त सडकै सडक हिड्नु पर्ने रहेछ । रमाइलो नै भयो । हामी करिब आधा घण्टा भन्दा केहि वढी समयको दुरीमा हामी घरमा पुग्यौ । आमा र दिदीलाई भेटे । हामी लिम्बु समाजमा गाउँघरको चलन जो पराइ आफन्त आए पनि खाजाको रुपमा तोङ्गवा खुवाउने चलन छ । बर्षौ पछि तोङ्गबाको चुस्की लिएको मात्रै थिए टुप्लुक्क आइ पुग्नु भयो भिम काका । भिम काका र मेरो १२ वर्ष पछिको भेटभाट थियो यो । बाह्र वर्ष अगाडि जब म मलेसियाबाट फर्के पछि केही आफन्त नाता गोताहरुलाई मलेसिया पुर् याएर मैले पनि दलाली पेशा अंगालेको थिए फाइदा बेफाइदा बदनाम दुर्नाम आफ्नै ठाउमा छ । त्यस समयमा भिम काका मलेसिया जानु सक्नु हुन्न थियो भिम काका कै वहिनीले पैसा नदिएको भए । फुपुले सहयोग गर्नु भयो थोरै तिनै मेरो मुख हेरेर भए पनि । फुपुको पैसाले भिम काका मलेसिया पुग्नु भयो । कमाउनु भयो या भएन त्यो आफ्नै ठाउमा छ होला । भेटघाटमै काकाको मुखैबाट सुने काकाहरु धेरै भाग्यमानी हुनुहुदों रहेछ म जस्तो दुर्गतीको परमकष्टको समय सिमा ननाघि कनै पुग्नु भएछ मलेसिया । बाटोमा कतै कुटै खान परेन कतै लुटै खान परेन जंगलमै सुत्न परेन । काकाहरु मलेसियामा पुगेको खवर पाउने वितिकै म थाइल्याण्ड नेपाल फर्किए । नेपाल फर्कने बितिकै फुपुले आफ्नो देवरहरु पनि पठाउने बिचार गर्नु भएको रहेछ । ठीकै छ मैले पनि केही मान्छेहरु तयारी गरेर लाने विचार गरे छुट्टिने बेलामा फुपुले भन्नु भयो "कान्छा यो चोटी मलेसिया बाट फर्केर आउदा काकाबाट जति पैसा हुन्छ ल्याइ दिनु हैू म फेरी लागे मलेसिया । हामी सबै जना थाइलाण्डमा थियौ साथीहरुको जाने बाटो त त्यही नै हो । उनीहरु मलेसिया लागे म चाहि फेरी फर्किनु पर्ने भएकोले जहाजबाट गए । हुन त उनीहरुलाई पनि जहाज बाटै लगेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आउथ्यो तर उनीहरु कमिज सुरुवालको भेषमा नै थिए त्यहाँ पनि जहाजबाट गएको भए मलेसिया त हैन सिधै नेपाल चाहि पुगिन्थ्यो । जे होस म मलेसिया पुगेर उनीहरुलाई जिम्मा लिनको लागि पर्खेर बसे । हप्ता दिनको पर्खाइ पछि पनि मैले उनीहरुलाई पाउन सकिन मोवाइलको जमाना आइ सकेको थिएन त्यति खेर मैले सम्झ कुनै एजेण्टले जिम्मा लिएर काममा लगाइ सक्यो होला र मलाई अस्पुष्ट समाचार पनि त्यस्तै आयो किनकी कुनै घट्ना दुर्घट्ना भएको खण्डमा त मलाई जरुर खवर आउनु पर्ने हो तर आएन तै पनि आफ्नो साथीहरु र गाउले हरुलाई भेट्न नपाएकोले मन अमिलो बनाउदै फेरी थाइल्याण्ड फर्किए । थाइल्याण्ड आए पनि वोर्डर पार गराउने एजेण्टलाई सम्पर्क गरेर सोधे मेरो मान्छेहरुको बारेमा । एजेण्टले सबै मान्छेहरु मलेसिया पुगेर कामका लागि सकेको जानकारी दिए पछि म ढुक्कले नेपाल फर्किए । मलेसिया जान लागेका साथीहरु मध्य एक जना साथी थियो दिपेन श्रेष्ठ उ पहिले पनि मलेसिया वसी सकेको भएकोले उसले पनि थोरै तिनै गाइड गर्ने कुरामा एक किसिमले ढुक्कै नै थिए । नेपाल आएको झण्डै हप्दा दिन पछि नै मलाई थाइल्याण्डबाटै फोन आयो । दिपेन जी फोनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो ूनयन्द्र जी त्यो विष्णु नेपालमा मास्टर थियो हो- मैले भने "सायद होला" उताबाट उत्तर आयो "त्यो विष्णले गर्दा म पनि पक्राउ परे मास्टर हु भनेर सान दिदै थियो लोसे भएकोले हिडनै मानेन म उस्को साथमा रहदा रहदै हामी पक्राउ परेर अहिले थाइल्याण्डमा आएका छौ ।" अरु सबै साथीहरु मलेसिया पुगे पनि दिपेन र फुपुको देवर विष्णु राई जेल परेर फेरी थाइल्याण्ड फर्केर आएको कुरा जानकारीमा आए पछि यो समाचार मेरो लागि अप्रत्यासित जस्तै भयो । बास्तबमा मलाई त्यो बोर्डर पार गराउने दलालले भ्रममा राखेको रहेछ तर हुनुहार जे भयो मैले फेरी विष्णुलाई मलेसिया पठाउनको लागि भनेर थप नेपाली दश हजार पठाई दिए । त्यस पछि उ मलेसिया छिरेको खबर पाए । मैले काकालाई मलेसिया पुर् याए पछि मेरो काकासंग कहिल्यै सम्पर्क हुन सकेन काकासंग सम्पर्क नभए पछि मैेले फुपुको नासो ल्याइ दिने कुरा पनि भएन तर सुने फुपुले म संग धेरै मन दुखाउनु भयो रे तर मेरो हेराइमा दुखाउनु पर्ने ठाउ छ जस्तो लाग्दैन तर आज बर्षौ पछि काकासंगको भेटघाट पछिको भलाकुसारीमा काकाको आत्मालापले के बुझे भने मैले गरेको सहयोग काकाले गुण नै सम्झिनु भएको रहेछ धन्य छ काका तपाईलाई ।
काकासंगको धेरै लामो गन्थन पछि त्यो दिनलाई हामीले विश्राम गर् यौ । सम्झे अब गाउघरमा विजुली पनि आएछ । मैले कहिल्यै कल्पना गरीन मेरो गाउँमा पनि विजुली पुग्छ भन्ने कुरा । बिजुली त हाम्रो सपना हो । हामी सानै थियौ मेरो घर देखी पारी धनकुटा बजार देखिन्छ जहाँ रात परे पछि सधै खुला आकाशका तारा चम्के जस्तै विजुली वत्ती वलेको देखिन्थ्यो तिहारमा दिपावली मनाउनलाई सजाइएको रँगिन बत्तीका सजावट झै लाग्दथ्यो धनकुटा बजार । टाडाबाट चम्केको देखिने भएकॊले मैले टाडाबाट विजुली नियालेको वर्षौ सम्म पनि विजुली राती उड्ने जुनकिरी जस्तै पिलिक पिलिक चम्किन्छ भन्ने नै भ्रममा रहे । मलाई घरमा विजुली बलेको नौलो हैन मेरो गाउँघरमा पनि बिजुली पुगेकोमा चाहि आश्चर्यमा परेको थिए । हुनत धरान धनकुटा सडकको निर्माण भै सके पछि पनि गाडि चड्नको लागि घण्टौ हिड्नु पर्ने हाम्रो जस्तो विकट ठाउँमा अहिेले विजुली पानी सडक फोन टोल टोलमा छ घर घरमा छ जीउनु मात्रै सक्नु पर्छ अझै धेरे देखिन्छ ।
बेलुकी अलि ढिलो निदाएकोले विहान बिउझिदा घाम निकै माथि झुल्की सकेछ । ठुली दिदीेले "कान्छा ! उठ्ने बेला भएन " भन्दा मात्र एक्कासी विउझिए । मेरो यस चोटी हिमाल हेर्ने धोको चाहि पुरा हुन सकेन । मेरो घरबाट उत्तर तिर देखिने काचनजँघा मकालु र सगरमाथा अझै पनि म बालक छदा झै कल्कलाउदो बैश लिएर हास्दै हामीलाई नै नियालेर बसी रहेको छन कि बैश झरेर फुङ्ग उडि सकेको छ म जस्तै । मैले यहाँ वर्णन गर्न सकिन किनकी तुवालोले पुरै आकास धर्ती धमिलो बनाएका थियो । पारी पाटी बुधुक डाडाँ पनि बजार भै सकेछ । निकै बाक्लो बस्तीहरु थपी सकेछ । हुनत हामी बालककाल छदा पनि त्यो ठूलो सहर थियो तर त्यो समयमा मानव वस्तीको शहर हैन मृत शरिर गाड्ने ठाउको शहर थियो । भूतले तसा्रउछ भन्थे खै अहिले त भूत आफै तसर्िएर भागे जस्तै छ । पहिले यो डाडामा केही थिएन चिहानै चिहान मात्र थियो । एउटा स्कुल थियो डाडामा एउटा पाचायत भवन थियो वावा प्रधान पाच भएको बेला बनाएको हो भन्थ्यो मानिसहरुले । हामीे स्कुल पढिन्जेल सम्म पनि खुट्टामा जुत्ता लाउने चलन थिएन जुत्ता लाएर हिड्नु भन्दा खाली खुट्टा हिड्नु नै सजिलो लाग्थ्यो । सट्र सुरुवाल र खालि खुट्टा स्कुल जान्थ्यौ । िसंगडा जस्तै छेउ कुना नमिलेको ग्राउण्ड थियो । झुम्रो र भोगटेको दानाहरु मसिना ढुँङ्गा घारीमा खाली खुट्टाले गोल हान्दा हान्दै खुट्टाको सवै नङ्गहरु घाउको पाप्रा उक्किए झै उकिन्थे । एक दिन चर्को घाममा झुम्रोको गोल खेल्दा खेल्दै सारै तिर्खाएछु । त्यति खेर अहिले जस्तो खाने पानी को सुविधा थिएन । धेरे तल कुवामा जानु पथ्र्यो । स्कुलको घण्टी लागि सकेको थियो । ग्राउण्ड छेउमै नातेदारको घर थियो । पानी खानको लागि भनेर गएको घरमा ढोका लगाएको रहेछ फुपु अलि पर हुनुहुन्थ्यो फपुलाई भन्न मन लागेन फुपुले थाहा नपाउने गरी ढोका खोलेर भित्र हेरे चिन्डोमा पानी भरेर राखेको देखे । चिन्डो ठाडो पारेर धित मर्ने गरी पानी पिएर बाहिर निक्लदै गर्दा फुपु आइपुग्नु भयो अप्ठेरो मान्दै फपुलाई भने " फुपु मैले त चिन्डोको पानी खाइ दिए । फुपु मजाले हास्नु भयो र भन्नु भयो त्यो चिन्डोको पानी त गाइलाई खुवाउनको लागि आहाल बाट ल्याएर राखेको रहेछ । घर भित्र अधेँरो थियो तर फोहोर पानीले मेरो स्वास्थ्यमा असर गरेन बरु तिर्खा चाहि मेटियो ।
बिहानै खाजा खाए पछि आमाले भन्नु भयो "जा ! ठूलदाजुलाई पनि भेटेर आइज ।" म ठूलदाजुको तिर लागे । ठुल दाजु घरमा हुनुहुन्न रहेछ । फर्कदा म सधै मेरो जन्म भएको ठाउँमा जान्छु र आज पनि गएर त्यो ठाउमा धेरै बेर टोलाएर बसे यो त्यहि ठाउँ जहाँ म जन्मिएको थिए म हुर्किएको थिए । धेरै दुख सुखको स्मरणहरु छ यो डाडा संग । अहिले त त्यहाँ डाडा मात्र छ मेरो जन्म घरको भग्नाबषेश पनि छैन र पहिले त्यो ठाउँको सान मान इज्वत र बातावरण नै बेग्लै थियो । ठूलो घर थियो । घरको वरीपरि वरण्डा थियो । घर देखी तल बाजेले बगैचा लाऊनु भएको थियॊ । बगैचामा फलफुल स्याउ आलुचा आरु वखडा अँगुर सुन्तला अनार जुनार कागती अम्बा मेहेल केरा बगैचा भरी थियो । बाजे सर्धै सिकुवामा तमाखु पिएर वस्नु हुन्थ्यो । धेरै धरै मान्छेहरु आवत जावत गरी रहन्थे । गाउँमा कुनै मुद्धा मामिलाहरु पर् यो भने मुद्धा मिलाउनको लागि हामै्र घरमा आउथे । कुनै कुनै मुद्धाहरुमा बाजेले गरेको फैसलाहरुमा प्रहरीहरु आएर साक्षी वसेर जान्थे । घर देखि दक्षिण पश्चिमतिर ठूलो जँगल र मूलबाटो थियो मूलबाटोमा बेला बेला अपरिचित बटुवाहरु हिड्दथे बाबा बार्दलीमा बसेर देखेका जति सबै बटुवाहरुलाई बोलाएर जाँड खुवाएर पठाउने गर्नु हुन्थ्यो । गाउँ पुरा अन्धविश्वास अशिक्षा गरीवि र विकटताले भरिएको थियो । मलाई ठ्याक्कै एकिन मिति त थाहा छैन तर मैले यो कुरा आमालाई भन्दा त्यति बेला तँ त्यस्तै ४ वर्षको थिइस भनेर भन्नु हुन्छ । साँझ झमक्क परेको थियो हाम्रो घरमा गाउँका सबै वीस पच्चिस जना मान्छेहरु आए र आमासंग मागेर जाँड रक्सी खाए । मलाई सबै कुरा एकिन थाहा छैन बाजेले के के भन्दै गाउलेहरुलाई गालि गर्दै हुनुहुन्थ्यो । केही बेर पछि सबै गाउलेहरु हाम्रो घरबाट विदा भएर गए । केही बेरमानै हाम्रो घर देखि अलि तल एउटा घर थियो एक्कासी कोलाहल रुवाबासी मच्चियो सबै गाउलेहरु खल्याङ्ग बल्याङ्ग गर्न थाले । बाजे धेरै नै कराइ रहनु भएको थियो । एकै छिन पछि सबै चुपचाप भए भोली पल्ट सबै गाउलेहरुलाई बाजेले घरमा झिकाउनु भयो प्रहरी चौकीबाट पुलीसहरु पनि आएको थियो । छिमेकी घरको बोजु पनि र अर्को एक जना बोजु पनि हाम्रो घरको पिडिमा आएर डाको छाडेर धेरै धेरै रुनु भयो । वास्तविक कुरा थाहा थिएन मलाई तर बेला बेला बोजुहरुहरुकोमा जाँदा खेरी मिठा मिठा खानेकुराहरु खुवाएर पठाउने भएकॊेले ती वोजुहरु रुवेकोमा म पनि दुखि थिए तर पछि मात्र थाहा भयो ती दुइ महिलालाई बोक्सीको आरोपमा गाउलेहरु सबै मिलेर दिसा खुवाएर जघन्य अपराध गरेको रहेछ । त्यस्तो जघन्य अपराधको मुद्धा बाजेले पिडित प्रहरी र सारा गाउले अभियुक्तहरुलाई मिलापत्र गरेर पठाइ दिनु भयो । हाम्रोमा धान कुट्नको लागि ढिकी थिएन । अहिेलेको जमाना जस्तो मिलको चलन थिएन । सधै सधै मैले माथि नाम लिएका भिम काकाकोमा जानु पथ्र्यो । धान कुटेर फर्किदा निकै रात परि सकेको हुन्थ्यो । म सानै देखि अधेँरो भने पछि अत्यन्त डराउछु । जाँदा त म पनि हिनेर नै जान्थे फर्कदा चाहि राती निकै अबेला हुने भएकॊेले आमाले मलाई पिठ्यूमा बोकेर ल्याउनु हुन्थ्यो । विचमा सानो जँगल थियो भन्थे त्यो ठाउँमा राती तसा्रउछ । हामी सबै साना थियौ दिदीहरु साइला दाजु आमा मध्य आमा सबै भन्दा पछाडि हिड्नु हुन्थ्यो । कहिले काही साइला दाजुले पनि बोकेर विचमा हिड्ने गर्नु हुन्थ्यो तर आमाले मलाई पिठ्यूमा बोकेपछि सबै भन्दा पछाडि त म हुने भए । म सबै भन्दा सानो अधेरी रात त्यो पनि जँगलको विचमा सबै भन्दा पछाडि मेरो के हालत हुन्थ्यो होला मैेले जन्मे पछि डेढ दशक भन्दा वढी समय सम्म यही डाडाको सेरोफेरोमा रहेर विताए । धर्तीमा पहिलो आखाँ यही नै खोले । तोते बोले यही नै बोले । म जन्मदै हिमालको चिसो सिरेटो खादै कठ्याङग्रीयर हुर्किए । जीन्दगीको बालककालको लामो समय यही ठाउमा मात्रै समर्पित गरिन कि बर्षौ पछि सात समुन्द्र पारीको देशमा रहदा बस्दा पनि निन्द्रा देवीको कोखमा देखिने सपनिमा सधै सधै त्यहि पुरानो घर बगैचा आँगन झझल्को दिइ नै राखेको हुन्छ अर्थात मेरो सपनाको गाउँ र घर भइ रहेको छ मेरो लागि त्यती खेरको घर पालुवा जनवारहरुमा िसंदुरे बिजुले र त्यस पछिका मान्छे भन्दा पनि ज्ञानी कलुवा गजुवा गोरुहरु र कलौरी गाई नै सपनाका दोस्तीहरु भै राखेका हुन्छन भने त्यही घर बगैचा जंगल बस्ती स्कुल चरण नै सपनाका गन्तब्यहरु हुन । मेरो सपनाको गाउँ जहाँबाट विश्वका सर्वोच्च सिखर सगरमाथा तेश्रो काचनजंगा र पाचौ मकालु को दृष्यालोकन गर्न पाइन्छ । हिमाल हेरेर कल्पना गर्थे त्यो भन्दा पारी पटी के होला तर मैले धेरै वर्ष सम्म मकालुलाई सगरमाथा त्यै हो भनेर सम्झेको छु । दशैमा नवरथा लाग्ना साथै गाउँको दमै आएर घरमा नगरा बजाउथ्यो सायद दशैको आगमनको सँकेत थियो त्यो । साच्चै चहलपहल हुन्थ्यो चाडबाडमा । दशैमा नगरा र बाजा गाजा सहित मौलो पुजा हुन्थ्यो । बाजे संग टिका लाउन आउने रैतीहरुको भिड लाग्थ्यो । अनगिन्ती मान्छेहरु आउथे खान्थे मातेर जान्थे । घरमा आएको मान्छेहरुलाई खुवाउन जाँड छान्दा छान्दा हातको नारीहरु सारै दुख्यो भन्नु हुन्थ्यो आमा । आमालाई अहिले यो कुरा सुनाउदा भन्नु हुन्छ अहिले त मलाई बर पिपलको सितल छहारीमा बसे जस्तै सितल भएको छ । तर आमा भन्नु हुन्छ मात्रै अहिले पनि घरमा आउने जो कोहीलाई पनि खाली मुख पठाउनु पर् यो भने आफै पनि कम्तीमात्र दुखी हुनुहुन्न । घरमा आउने पाहुनालाई चोखो मुख फर्काउनु हुन्न माग्न आउने मान्छेलाई खाली हात फर्काउनु हुन्न आफु मात्रै खानु हुन्न समाजमा बसे पछि कसैलाई दुख पर् यो भने आफ्नै दुख सम्झनु हुन्छ । कसैको घरमा मान्छे भोकै छ भने आफ्नो गासँ काटेर भए पनि अघाउनु दिनु हुन्छ । बाजे बाबुले यस्तै सस्कार बसाए र साखा सन्तानहरुलाई पनि यस्तै शिक्षा दिएर गए । बाबु बाजेले सिकाएर गएको यो जीवनको शिक्षा हामी सन्ताहरुले समान स्तरमा आजिवन ग्रहण गरेका छौ किनकी यो जीवनको शिक्षा भनेको बिद्यालयमा गएर हासिल गरेको जस्तो शिक्षा होइन यो बजारमा पाइने गिँजामा अड्काएर राख्ने नक्कली दात जस्तै हुन्छ तर जीवनको शिक्षा भनेको जन्मदै गिँजाबाटै पलाएर आएको हुन्छ जो कहिल्यै परिवर्तन हुदैन । बाजे बाबुमा निहित यो गुण र सँस्कार हामी हरेक सन्ततीका नसा नसामा भावनाहरुमा ब्यवहारहरुमा उत्रिएको छ भलै अहिलेको जस्तो स्वार्थी समाज र भिडभाडका लागि असफल र अनुपयुक्त पद्धती नै किन नहोस । मेरो सपनाको गाँउको सेरोफेरोमा मेरो पिता पुर्खाहरुहरुले एउटा निश्वार्थ र उदार सस्ँकारलाई विजारोपन गरेर जानुृ भयो यो अनन्त सम्म मौलाएर जानेछ सायद बँशानुगत गुण यसैलाई भन्छ क्यार ।
३८ साल तिर चैत्रको महिना अक्सर यस्ता महिनाहरु खडेरीका महिनाहरु हुन । जता ततै सुख्खा मौसम हुन्छ । रुख जंगलमा रुखका पातहरु झरेर उजाडिएको हुन्छ । जता ततै हावा हुरी बतास चलेर खुल्ला आकास पुरै धमिलो भएको हुन्छ । घर छेउको ठूलो सल्लाघारकिा आगलागि भएर जँगल छेउकै हाम्रा घर वरिपरीका केही वगैचा र केही छिमेकी घरहरु पनि सखाप भए । हेर्दा हेदौ वरिपरीबाट देखिने त्यो दरवार जस्तो भव्य भवन एकाध घण्टाको अवधीमा नै खण्डहरमा परिणत भयो । बाजेले साहै दुःखले बनाएको त्यो भब्य भवन आफ्नौ अगाडि खरानी भएको देखे पछि बाजेले मन थाम्न सक्नु भएन । आशुले उमेर नभन्दो रहेछ ८० वर्षको उमेरमा बाजे बेसरी रुनु भयो । हामी विचल्ली भयौ । हामी माथिको यो विपत्ती पछि यसको चोट सँगै बाबा थलिनु भयो र अनेक रोग सँग झेलीदै एक वर्ष पछि वित्नु भयो । त्यस पछि हामीले यो खण्डहरुलाई छाडेर अलि केही पर नयाँ घर किनेर सर् यौ । घर आगलागि भएको पिर र एकमात्र छोरा वितेको चोटसँग मुकाविला गर्दा गर्दै बुहारी हामी चार भाइ नाती दुइ वहिनी नातीनी र पनाती पनातीनीको माया र सान्त्वनाले पनि बाजेको पिरलाई खुशी तुत्याउन सकेनौ । पिरै पिर र सोकै सोकमा बाबा बितेको एक वर्ष पछि नै बाजॆले पनि बाबाको बाटो समाउनु भयो । साँसारिक नियमको पालना गर्दै हाम्रो नजर र समिप्यबाट बाजे बाबु मात्र अलग हुनु भएन त्यो मेरो सपनाको गाँउ अहिले साच्चै खण्डहरुमा परिणत भएको छ । वरीपरिका फलफुल बगैचामा रहेका फलफुलहरु रेख देख र मलजल नपाएर अहिले सबै मासिएका छन । सुन्तोलाकाबोटहरु सवै सुकेर दाउरा वाली सकिएछ । उति बेला कतै नपाईएको स्याउको रुख अहिले जरा धरी खनेर आगो तापिएको छ । बाजेले श्रृजना गरेको बगैचा अहिले "सुगुरलाई सुगन्ध फुलबारी डेरा सार्कीलाई श्रीखण्ड कामीलाई केरा" भने जस्तै भइ राखेको छ । बाजे सबै मान्छेहरुलाई थेगो मिलाएर सधै भन्ने गर्नु हुन्थ्यो "जोकेरे मेरो सबै नातीहरु मेरो प्रतापले म जस्तै बाठो छ मेरो बिडो थाम्छ ।" तर बाजेले नाती पनातीहरुकै लागि रोपेर हुकाईएको फलफुल बोट बिरुवा ढालेर दाउरा चिरेर आगो तापेका छौ बाजेको सपनालाई हामीले मूतको न्यानो सम्झेर खिल्ली उडाएका छौ । यि सवै इतिहास र वर्तमानका जीवित साक्षी हुनुहुन्छ हाम्री आमा । आमा त्यती जान मन गर्नु हुन्न त्यो ठाउँमा किनकी त्यो ठाउमा आमाले धेरै धरै पसिना वगाउनु भएको छ । धेरै धेरै आशु झार्नु भएको छ । साच्चै भन्ने हो भने यसैको सेरोफेरोमा आमाले आशु रित्याउनु भयो । मेरो स्मरणमा नआएका र म जन्मिनु भन्दा अगाडि आमाले घर परिवारका लागि भोगेका दुख र सँघर्षका दर्दनाक दुख सुखका विलापहरुको सँगालो अहिलेलाई समय र परिस्थिति मै जिम्मा दिदै गरुला तर बाजे बाबुको तानासाही शासक प्रबृतिको युगको सुरुवातसँगै अन्त पनि गर्नु भएको छ । अहिले त्यो सान रवाफ र सँघर्ष एउटा इतिहास भएको छ । गजवको स्मरण भएको छ । जे थियो जस्तो थियो देख्नको लागि त मैले सपना नै देख्नु पर्ने भएको छ । केवल अहिले त उजाड छ सुनसान छ बेवारिसे भएको छ ।
यस्तो पनि जमाना थिए कसैले डाडाँमा गएर हात सुइय पार्ने वितिकै गाउका भए भरका मान्छेहरु एकतृत हुन्थे खेती वाली लाउने र भित्राउने बेलामा पनि हार गुहार हुन्थे आलो पालो गर्ने पालो पैचो गर्थे । मर्दा सबै दुखी हुन्थे पर्दा सबै एक हुन्थे । हाट वजार हिड्दा पनि एक मत र एक हुल भएर हिड्थे समाज पैसामूखी भै सकेको थिएन । कसैलाई केही पर्ने वितिकै समाज एक हुन्थे तर अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । समाज भ्रष्ट भएको छ नाता गोता छैन छर छिमेकीको सम्वन्ध छैन हामी भन्ने भावना कतै छैन । भए भरको सुविधा मै मात्र लिउ मिठो मसिनो मै मात्र खाउ विकाशको फल मैले मात्रै पाउ धाराको पानी मै मात्र पिउ विजुली म मात्रै बालु मेरो जग्गामा कसैले पाइलै नटेकुन म कहिले मर्दिन मरे पनि मलाई कोही चाहिदैन भन्ने भावनको विकाश भएको छ ब्यक्ति ब्यक्तिहरुमा । हरेक छिमेकीहरु एक अर्काका दुस्मन भएका छन । सम्वन्ध त छदैछैन बोलचाल समेत छैन । हामी विदेश बस्दा बस्दा वाक्क भएका मान्छेहरु बेला बेला गाउँ घर जन्म थलो पिलोहरुलाई नै केही वनाएर बसौ जहाँ जन्म्यौ जहाँ हुक्र्यौ त्यही नै केही गरौ भन्ने कतै नभएको राष्ट्रबादी सोच फुर्ने गर्छ । विदेशमा खाएको दुख हण्डर सम्झदा देश र गाउँकै लागि ज्यान अर्पन गर्छु भन्ने कसै सँग नभएको राष्ट्रभक्ति भावना जाग्ने गर्छ तर सोझो गरेर खानु पर्छ विदेशमा सवै मित्र थोरै सत्रु तर गाँउमा सोझो गरेर खानु पर्छ थोरै मित्रु सवै सत्रु यो समयको विकृति हो ।आमासंगको समिप्यमा रहने ती छोटा दिनहरु थाहै नपाई विति सकेछ । सम्झेको थिए ८२ वर्षको बृद्ध आमा अवत धेरै गल्नु भयो होला आगन नै परदेश भै सकेहोला हिडडुल गर्नको लागि पनि कसैको साहारा चाहिने भो होला तर मैले थाहा पाउदा देखीको मेरो आमाले देखाउने गर्नु भएको जोश जाँगर मिहेनत यो उमेरमा आई पुग्दा पनि कुनै बीसको उन्नाइस घटेको पाइन । घास दाउरा गोठाला अझै आमाकै भर देखे । जस्तै कहाली लाग्दो दुख बिपत्तीमा पनि यो गाँउघर पाखा र समाज देखी कहिल्यै विमुख हुन नखोज्ने मेरो आमाको गाँउ समाज प्रतिको समर्पण र त्याग सबै छोराहरु आफ्नो काखमा नहुदाको पिडा डुब्न लागेको आफ्नै जीबन स्वार्थी र अवसरवादी छर छिमेकी र आफन्तहरुसँगको वैमनस्यताको सामाजिक परिबेशले अलि थोरै भए पनि गाउँघर देखि अहिले चाही मन कुडिएको होकी जस्तै लागेर आमालाई भने आमा ! अब यो उमेरमा आएर धेरै दुख दुख गर्नु पदैन काठमाण्डौ गएर वसौ है ! हामी सबै छोरा छोरीहरु हुर्किएर ल्ााखापाखा लागे पछि घरमा पालिएको खसी बोका सुगुर गाइ कुखुराहरुलाई नै आमाले आफ्नै सन्तान सम्झेर रमाउनु थाल्नु भयो । बाबु नानीको उपाधी तिनै घर पालुवा पशूहरुले पाउन थाले । पशुहरु पनि कम्तीका हुन र आमाको आवाज र बोली नै सुन्न नहुने त्यसै त्यसै रमाउथे । काठमाण्डौ जाने कुरा गर्ना साथै सधै सधै पाल्तु जनवारहरु सग हुने बिछोडको पीडा सहनै सक्नु हुन्नथ्यो र भन्नु हुन्थ्यो यो सुँगु खसी कखुरा पनि सगै लानु पर्छ है । तर आमाले यस चोटी केही भन्नु भएन र सम्झे अब चाही आमाले हरेश खानु भएकै हो । सायद आमाले सम्झनु भएको होला एउटा छोरा चाही संगै भए हुने थियॊ । आमासंग बसेको पाँचौ दिनमा नै फिर्नु पर्ने भयो विहानै । आमा र दिदीले बिहान सबेरै मेरो लागि भनेर खाना पकाई दिनु भएछ । खाना खाइसके पछि हिड्ने बेलामा आमालाई भने आमा ! फोटो खिच्नु पर्छ लुगा फेनुृ्र न ! आमा र दिदीेले लुगा फेरेर आउनु भयो । भिम काकाले खिचिदिनु भयो आमा दिदी र मेरो । त्यस पछि मैले आमा र दिदीको मात्रै खिचे । अन्तीममा आमालाई अलि सिधा बस्न लगाए र भने आमा ! अव आमाको मात्रै खिच्छु है ल ! आमा बोल्नु भएन । मैेले आमाको मात्र फोटेा खिचेर क्यामरा बन्द गरे मात्र आमा रुनु थाल्नु भयो केही भन्नु भएन रुनु मात्रै भयो । दुख पीडा र अन्यायमा आमाले कहिल्यै आशु झार्नु हुन्न बेस्सरी मन दुख्नु पर्छ आमाले आशु झार्ने नै हामी सन्ततीको लागि मात्र हो । मैले आज फेरी आमाको मन दुखाए । हामी सधै घरबाट हिड्ने बेलामा आमा सोच्नु हुन्छ र भन्नु हुन्छ "तिमीहरु गए पछि फर्केर आउन जान्दैनौ म अब धेरै बाच्दिन फेरी आउदा मलाई भेट्दैनौ होला ।" अंगालो हालेर भने "आमा नरुनु साइला दाजु पनि तीन चार महिनामा आउनु हुन्छ म फोन गरी रहन्छु" आमाले दुइ शब्द निकान्नु भएन आशु पुछ्दै रोइ रहनु भयो मात्र । हामी आमा छोराको यो वियोगान्तीक रुवावासीको माहौलमा ठूली दिदी र भिम काका पनि समाहित हुन सकेनन त्यहाँबाट पनि ओझल पर्नु भो सायद वहाहरुले पनि आसु रोक्न सक्नु भएन । आमाको दुधसँगै आशुको भार पनि बोक्न तयारी थिए म यति हो मैले सकेको आमाको आशुलाई मैले पनि आशुले नै साथ दिए । तुरुक्क आखाँबाट आशु झरे पछि आशुले भिजेको मेरो आखाको परेलीलाई हातले पुछ्दै भने "आमा अब म जान्छु उता पुगे पछि फोन गर्छु नि ! चिन्ता नगरी बस्नु धेरै दुख गर्नु पदैन पैसाहरु चाहियो भने पठाइ दिन्छौ नि है ! । आमाले मुन्टोमात्र हल्लाउनु भयो । केही दिन पछि इजरायल आउने साथ फेरी त्यस्तै व्यस्ततालाइ चिर्दै आमालाई फोन गरेर भने "आमा म त इजरायल आइ पुगे त" आमाले फेरी पनि रोदन मिश्रीत स्वरमा भन्नु भयो "के गर्नु त छाडेर गइ हाल्यौ त ! अब कहिले आउछौ त " मैले भने "एक वर्ष पछि" आमाले फेरी भन्नु भयो "एक वर्ष पछि मात्रै ल ल म पर्खि रहन्छु है त ! अर्को साल सम्म बाँचे भने……………" फोनमा अचानक खरावी आउछ र लाइन काटिन्छ कम्प्युटर एकहोरो बोली रहेको हुन्छ सवै सक्र्युटहरु व्यस्त छ कृपया फेरी प्रयास गर्नु होला ।